MAXAY TAHAY CIRIIRI WAXTAR LEH: ISTICMAALKA IYO KA HORTAGGA - BERRY
Cloudberry waa warshad dilka ah oo laga helo cagaarka peat iyo kaymaha dhoobada ah ee Russia iyo Belarus, iyo sidoo kale in tundra (gobolka polar-arctic). Berry-casaan-bunni cas, leh magac la mid ah, waa cajiib leh faa'iido leh oo dhadhan fiican leh.
Halabuurka kiimikada ee berry waa caleen
Caleemaha waa qani ku ah fitamiinada iyo fiber. Marka la eego xaddiga fitamiin A, caleemaha waa dhowr jeer ka hor karootada, waxaana jira fitamiin C oo ka badan xayawaanka citrus. Sidoo kale, miro yar ayaa hodan ku ah fitamiinada kooxda B iyo E.
Waxaa ka mid ah walxaha macdanta, halka laga soo xigtay caleemaha caanka ah, marka hore waa lagama maarmaan in la kala saaro fosfooraska, potassium, birta, aluminium, silicon iyo cobalt.
Intaa waxaa dheer, halabuurka kiimikada ee berry waa malic, citric iyo acids organic salicylic, sonkorta (monosaccharides waxtar u leh jirka - glucose iyo fructose), pectins, fareeshka iyo dhuubashada dabiiciga ah. Halabuurka miro ayaa sidoo kale waxaa ku jira asiidh dufan leh oo cadaan iyo ash. Qeybta ugu muhiimsan ee kiimikada qamriga (83.3%) waa biyo. Waxyaalaha borotiinka ee berrida waa mid yar - kaliya 0.8%.
Cloudberry waa warshad woqooyi ah oo koraysa halkaas oo ay jirto tamar la garan karo ee fitamiinada dabiiciga ah sababtoo ah xaalad aan fiicnayn ee xaaladaha cimilada, ma aha oo kaliya miisaanka koraya, muuska, rummaanka iyo geedaha kale ee kuleylka jecel, laakiin sidoo kale miraha caadiga ah ee xarfaha dhexe sida tufaax, , strawberry iyo raspberry. Dhab ahaan, xaaladani waxay go'aaminaysaa aragtida muraayadkan, sababtoo ah waa ilaha ugu muhiimsan ee fiitamiinada, iyo sidoo kale macdanta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee aadanaha ee dadka ku nool Arctic iyo in ka badan qof kasta oo ka cabanaya beriberi.
Ma taqaanaa? Qodobka sare ee fiitamiin C ee daruuraha ayaa u oggolaanaya dadka deggan Waqooyiga in ay u isticmaalaan berrigan sidii wakiil ka-hortag ah oo loogu talagalay. Waxa xiiso leh, haddii caleemaha ay barafoobaan kadibna kululaan, qadarka ascorbic acid ee iyaga kuma beddeli doono. Sidaa daraadeed, habraaca ay sameeyeen geesiga caanka ah "Snowflake" ee kooxda "Shilalka" ("Waxaan ka dhigi doonaa daruuraha ka soo barafka, diirimaad iyo cabitaanka nuugista") ayaa u ogolaaday inuu ka faa'iidaysto dhammaan sifooyinka wanaagsan ee berriga. Laakiin cawska qoyan ee qoyan waxay ku jiraan maadada fitamiin C oo kaliya 85%.
Tilmaamidda danaha sayniska ee cloudberry waxay la xiriirtaa xilligii Soofiyeeti: sharaxaadda sayniska ee ugu horeysay ee berry ah ayaa la sameeyay 75 sano ka hor by Professor Tserevitinovym Fedor Vasilyevich. Waxa kale oo uu go'aamiyey halabuurka kiimikada ee berry ee noocyadaas.
Qalabka daaweynta ee daroogada
Caleemaha Cawska, xididdada iyo nooca berry waxay leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh oo kuu ogolaanaya inaad ka takhalusto tiro cudurro ah. Gaar ahaan, potassium ku jira cloudberries dib u soo celinta shaqada ee wadnaha iyo xididdada dhiigga, caadada hawsha beerka, iyo kor u qaadida ka saarista bile. Cloudberry ayaa hoos u dhigaysa hannaanka hargabka iyo hindhisada, sidaas darteedna saameyn ku leh maskaxda iyo caloosha, waxay caadi u tahay hababka jimicsiga ee jirka, gaar ahaan ka dib markii sumooba.
Fitamiin E, oo ku jira daruuro, waxay hagaajinaysaa aragga, waxay hagaajisaa wareegga dhiigga, waxay xakameysaa xinjirta dhiigga. Waxaa intaa dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay qiyaasta la xoojiyay ee fitamiinkan, unugyada jidhku waxay helayaan kor u kicin degdeg ah, taas oo si gaar ah muhiim u ah, tusaale ahaan, haddii ay dhacdo gubasho.
Isticmaalka hawo-mareenka jidhka sida diaphoretic iyo anti-inflammatory waxaa sidoo kale lagu arkay calaamadaha cudurada neefsashada, gaar ahaan bakteeriyada, iyo dhuun xanuun. Qaybaha bactericidal ee daroogada ayaa u oggolaanaya in loo isticmaalo daaweynta nabarradaha nadiifka ah, iyaga oo u codsanaya caleemaha cusub ee la gooyey ee warshadda, oo la shiiday saliid kalluunka.
Cloudberry sidoo kale waxay leedahay awood u leh in laga saaro barar iyo dheecaan xad-dhaaf ah oo jirka ka yimaada, taas oo ka dhigaysa bakeeriga walax waxtar u leh cuntooyinka muddada uurka.
Caleemaha waxaa sidoo kale loo isticmaalaa cystitis, dropsy, scabies, turki iyo cuduro kale oo badan. Waxaa la aaminsan yahay in berrida uu yarayn karo suurtagalnimada burooyinka malignantiga ah. Haddii buraashaas oo kale ay horey u jirtey, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo gruel of miro cloudberry jajabiyey, laakiin waxtarka habka daaweynta this waa su'aal.
Qofka oo daciif ah ka dib xanuun kasta ama walbahaarka, isticmaalka daruur-caleen waxay kaa caawineysaa inaad si deg deg ah uga kabsato, dhiirigeliso oo aad dareento fiicnaan. Waa ku filan inaad qaadato casiirka berriga dhowr jeer maalintii, lagu qasi jiray isla cabirka biyaha.
Sida loo iibsado oo loogu kaydiyo walxo cayriin oo ka timaadda daruuro ujeedooyin daaweyn ah
Xaglo-qabad ayaa la qaataa dhammaadka xagaaga. Calaamad u ah bislaanshaha waa kala soocidda fudud ee uurjiifka ka soo baxa sepal iyo dheecaanka badan ee casiir ka soo berry, haddii la cadaadiyo.
Waa muhiim! Muddada qaadashada berry ee caleemo daradu ma socoto muddo dheer, ka dib laba todobaad kadib miro ayaa noqda mid jilicsan oo ku faafaya gacmahooda. Sidaa darteed, haddii la qorsheynayo in dib loo warshadeeyo darbiyada isla markiiba ama si loo qaado, waxaa fiican in aan la sugin illaa midhaha si buuxda u bislaadaan, haddii kale waxay si deg deg ah uga sii dari doonaan.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu kaydin karo caleemaha. Waxaa loo isticmaali karaa walxo cayriin ah si loo ilaaliyo ilaalinta, baradhada la shiiday, jamacyada iyo macmacaanada kale, oo ka mid ah hababka suurtogalka ah ee diyaarinta, qalajinta, qaboojinta, iyo kaadida ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Cabbirbadu waa in la qalajiyaa meel gudcur leh, meel fiican oo hawo leh ama qalajiye ama foorno heerkul aan ka sarrayn 50 ° C Si kastaba ha ahaatee, si siman u qallaji berry waqti ka waqti waa in lagu qaso.
Si loo qaboojiyo beeraha ayaa la dhaqay, la qalajiyey oo la dhigey lakabka keliya ee dusha sare ah, kaas oo la dhigo qaboojiyaha si qoto-dheer loogu dhufto. Maalin kadib, miraha waxaa la dhigaa bacaha gaarka ah ama weel balaastig ah waxaana loo diraa barafeeyaha kaydinta joogtada ah.
Cabbirada cawska ayaa lagu kariyaa sidan: berry waxaa lagu shubay sonkorta sharoobada kulul, ka tagay si ay u istaagaan dhowr saacadood, ka dibna la kariyey ilaa 30 daqiiqo, isku dayaya in aan dhibin sharafnimada midhaha leh karaya. Haddii aad rabto, waxaad ku dari kartaa in yar oo khamri cad oo macaanka ah (1.5 koob oo ah 1 kg ee berry). Macaanka la dhammeeyaa waxaa lagu shubayaa dhalooyinka laisugu shubay. 1 kg oo daruuro ah ayaa u baahan 1 kg oo sonkor ah iyo 0.3 litir oo biyo ah.
Cawska cagaarka dhajiyay si isku mid ah, laakiin ka dib markii karinta macaanka, ku xoqin iyada oo shaandho, ka dibna kasoobi 10-20 daqiiqo oo kale ka dibna ku rid on dhalooyinka.
Si aad jelly uga sameysid caleemaha, berry ayaa lagu cadaadiyaa, qasacad biyo ah (1 qaybood oo biyo ah 5 qaybood oo miraha ah), la kariyey wax aan ka badnayn shan daqiiqo ka dib karkarinta, ka dibna la gooyey, sonkorta ayaa lagu darayaa (xaddiga u dhigma miisaanka berry), gelatin qoyan (30 g halkii 1 kg ee berry), kululaynta, ma karkariyo, ku shub dhalooyinka iyo duudduubnaa.
Cabbirrada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in la sameeyo baradho la shiiday, taas oo, markaa, markaa waxaa loo isticmaali karaa saldhig u ah suxuunta kale. Berry waxaa loo keenay karkariyo, ay suuxaan marin shaandho, ku dar sonkorta (0.4 qaybood miisaanka ee berry), ku faafi bangiyada, qabow oo ku kaydi meel qabow.
Si aad u hesho daaqada daruuraha, diyaarisay qaabka kor ku xusan, baradhada shiidan ayaa la qalajiyey foornada kulaylka yar.
Qodobka Cagaaran berry ayaa si dhakhso ah loo dhigaa dhalooyinka laisugu sameeyey, daboolay sonkorta (200 g halkii litir) iyo ka tagay ilaa miro soo saarey casiir. Kadibna waxaa laga buuxsamaa biyo karkaraya, daboolana dabool leh.
Si la mid ah, daruuro cufan ayaa la diyaariyey, laakiin halkii biyo karkaraya, sonkorta ayaa lagu daraa weelka mar kale, ilaa ay ka daboosho berry, iyo, daboolay dabool, ku kaydsan qaboojiyaha ama miiska.
Si aad u samayso casiirka caanaha ah, furutaha berry, tuujin juuska adoo cheesecloth, kuleyl isaga oo aan karkarin, ka dibna ku shub qasacadaha, iyaga nadiifin 10-15 daqiiqo (laban litir iyo 1-litir, siday u kala horreeyaan) oo u rog.
Cabbirbada la waraabiyo waxaa loo diyaariyaa siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaad ku shubi kartaa miro la tiriyay oo ku jira weel laisugu shubay oo biyo ku shub heerkulka qolka, ka dibna dabool oo ku adkee meel qabow. Si loo hubiyo nadiifinta dhalooyinka, intii aad karkarin lahayd ama kuleylka, waxaad ka tirtiri kartaa suxuunta gudaha gudaha vodka, aalkolada, iyo xataa si ka fiican rumaysadka, tani waxay siin doontaa berri dheeraad ah oo taabasho leh. Si aad u qoydo daruuraha ku jira tuubo ama foosto, nooca berry ah ayaa lagu shubay sharoobada (0.08 g oo sonkor ah halkii 1 litir oo biyo ah, halka karkarinta qanjariga iyo dhirta lagu daro dhadhanka - xiirida, qorfe, qadhaadh iyo allspice). Tubbo ku daboolan daboolid yar yar ama saxan, oo kor saaran dulmiga. Weelka waa in lagu daboolaa maro oo la geynayaa Maqsin.
Ma taqaanaa? Ruushka weyn ee Ruush Alexander Pushkin wuxuu ahaa taageere wayn oo daruuro qoyan. Waxay yiraahdaan xitaa rajadiisii ​​ugu dambaysay ka hor dhimashadiisa waxa ay ku xiran tahay raaxeysigan.
Qaar ka mid ah noocyada kala-soocida ee kor ku xusan waxay suurtogal aheyn in aaney ilaalin kaliya berry ee caleemaha mudo dheer, laakiin sidoo kale waxay ilaalinaysaa bulkada of tayadoodu bogsashada.
Waa muhiim! Caleemaha waxaa si fiican loogu isticmaalaa qaabka khafiifka ah ama saafiga ah ee loogu talagalay dadka qaba dhibaatooyinka leh mareenka caloosha, maxaa yeelay abuurka adag ee berry wuxuu ka xanaaqi karaa derbiyada caloosha ama mindhicirrada.
In warshad cloudberry, marka lagu daro berry, caleemaha, xididdada iyo ubax ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. Caleemaha, jirridda iyo ubaxa ee cirifka waa in la ururiyaa inta lagu jiro muddada ubax (dhammaadka guga - bilowga xagaaga), iyo rhizomes - dayrta, ka hor inta wajiga nasashada. Marka ururinta berry, waxaad sidoo kale soo ururin kartaa oo iskudhafka, waxay la qalajiyey oo isku qasan caleemo qallalan.
Alaabada ceeriin ee la uruuriyey ayaa la qalajiyey si la mid ah sida berry - meel bannaan oo furan, ka dibna la dhigo boorsada canjag ama dhalooyinka ku jira oo lagu kaydiyaa heerkulka qolka qol qallalan.
Isticmaal daawada dadweynaha: daaweynta cirifka
Berry Cudurka ayaa isticmaala
Miraha Cloudberry waa antioxidantka ugu xoogan dabiiciga ah, waxay dib u soo celiyaan difaaca waxayna gacan ka geystaan ​​dib u soo kabashada guud ee jirka. Iyada oo gacan laga helayo midhaha geedka this, waxaad sidoo kale hoos u dhigi kartaa heerka baruurta waxyeelada leh iyo ka hortagga horumarka unugyada kansarka.
Awoodda caleemaha si loo joojiyo caabuqyada kala duwan iyo nabarrada bogsata ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed. Mirahaas waxaa lagula taliyaa dadka qaba cudurrada dhiig-karka, xanuunada ku dhaca haweenka uurka leh iyo cudurada caloosha. Waxaa wanaagsan in la cuno berry of cloudberry calaamadaha ugu horreeya ee suntan jirka, tani waxay ka hortagi doontaa nuugista sunta dhiigga sababta oo ah filimka ilaalinta, kaas oo daboolaya derbiyada caloosha ku jira fareeshada iyo pectins.
Caddaantu waa kalooriye aad u hooseeya, sidaa daraadeed waa in ay si aad ah u qiimeeyaan dadka qaba miisaan xad dhaaf ah. Intaa waxaa dheer, kiimikada kiimikada ee daruuri waxay keenaysaa dheecaan ka badan dareeraha jidhka iyo kala-soocidda dufanka, halka ay jirto jiritaanka guud ee dheef-shiid kiimikaad.
Calaamadaha daruuriga ah ee ku jira maadooyinka caanaha, gaar ahaan kalsiyum, waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta xaaladda ciddiyaha iyo timaha, sidoo kale waxay leeyihiin saameyn guud oo faa'iido leh jirka, gaar ahaan haweenka.
Cloudberries ma luminayaan hantidooda faa'iido leh marka la qaboojiyey, noocyada kale ee wax soo saarka waxay la xiriiraan khasaarooyin gaar ah.
Shaah baruur leh ayaa loo diyaarin karaa siyaabo kala duwan. First of dhan, ujeedooyinkaas, dabcan, caleemaha qalajiyey ee geedka waxaa loo isticmaalaa. Cabbitaanka waxaa la dhajiyay at heerka of 2 tbsp. Waxaan ka tagayaa galaas biyo ah waana mid tayo fiican leh xiliga fasaxa, marka uu hargabka iyo caabuqyada kala duwan ee fayrasku ku badan yihiin.
Waxaad ku dari kartaa caleemaha cirifka leh caleemaha dhirta kale - raspberries, strawberries, jeeriga, iyo rosehips. Intaa waxaa dheer, caleemaha cirifka ayaa lagu daraa shaaha madow. Halkii halkii sonkor ah, waxaa lagula talinayaa in lagu daro cabitaanka noocan oo kale ah.
Shaaha ka soo caleemaha caleemaha waxay cabbaan cystitiska iyo xanuunada kale ee habka jimicsiga.
Iyada oo ku saleysan caleemaha qalajiyey, waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa cabitaan dhadhan fiican leh, laakiin si loo hagaajiyo saamaynta daaweynta, waxaa ka wanaagsan inaad cabto qaboojiyey. Maraqkan waxaa loo isticmaalaa 80 ml saddex jeer maalintii si uu u joojiyo dhiigbaxa, iyo marka dhagxaan kelyaha laga helo, 125 g afar jeer maalintii.
Waxaad kaloo soo shubi kartaa shaaha ka soo baxa galbeedka. Xitaa qanjir yar oo qallalan oo lagu daro shaaha ayaa ku siinaya caraf udgoon oo qoyan oo qoyan, taiga taiga iyo heesaha dabka. Intaa ka sokow, ka dib marka aad cabto koob ka mid ah shaaha noocan ah, waxaad dareemi doontaa koror aan horay loo arag awood iyo tamar, daal badan iyo walbahaarka ayaa kaa saari doona gacanta.
Waa muhiim! Shaah baruurtu waxay leedahay bogsashada guryaha, laakiin looma qaadi karo kantarool la'aan. Ogolaanshaha in ka badan laba koob oo maalintii ah ayaa loo tixgeliyaa xad dhaaf.
Khudaarta cagaaran ee caleemaha ayaa sidoo kale leh bogsiin. Gudaha waxaa lagu qaadaa qaab lagu qasi karo biyo, si loo hagaajiyo rabitaanka cuntada iyo sida tayada. Ku codso dibadda - si loola dagaallamo cudurrada maqaarka, gaar ahaan kuwa isnadaamiska.
Caleemaha Cloudberry iyo rootida decoction
Decoction ah ee caleemaha iyo xididdada cufnaanta ee saamiga 1: 1 waa daawo gout, jir biyo iyo xannuunada mindhicirka, haddii aad cabto 50 g nus saacad ka hor cunto kasta. Wixii diyaarinta 1 tbsp. l alaabta ceeriin la jarjaray waxay u baahan yihiin inay ku shubaan galaas biyo qabow, kari ilaa 15 daqiiqadood, qabow, cadaadis.
Si loola dagaallamo dhiigbaxa iyo dhagxaan kelyaha, waxaad samayn kartaa decoction ma aha oo kaliya ka soo berry, laakiin sidoo kale ka baxo caleemaha cagaarka (1 tbsp Spoon koob oo biyo ah karkaraya). Isku dariddu waxay u baahan tahay inay kudhacdo, qaboojiso iyo cadaadiso. Qaado baaritaanada kor ku xusan saddex jeer maalintii 0.3 koob ama afar goor maalintii maalintii 0.5 koob oo kala duwan.
Cloudberry ka tago faleebo
Faleebada caleemaha caleemaha ayaa ah habka ugu wanaagsan ee looga takhaluso qufaca iyo quficinta dhibta, taas oo kuu ogolaaneysa inaad isticmaasho dhirta aan ahayn hargabka, laakiin xitaa qaaxada.
Faleebo waxaa loo diyaariyaa sida soo socota: 2 qaado oo ah caleemaha cawska la qalajiyey ayaa buuxsamay galaas aan dhammaystirnayn oo biyo ah karkarin, caadka oo la isku shaandheeyo ugu yaraan shan saacadood. Waxaa lagama maarmaan ah in la cabbo soo galinta dhalidda ee yar yar muddo dheer, taasi waxay gacan ka geysan doontaa xaqiijinta saameynta ugu sareysa.
Daawooyinka isku midka ah ee loo diyaariyey ayaa loo isticmaali karaa si loo yareeyo calaamadaha urolithiasis, iyo sidoo kale kaydinta cusbada.
Sida wakiil ah daaweynta cudurrada maqaarka, cloudberry waa mid aan caadi ahayn. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu daro tan, waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin qurux badan. Wax kasta waxaa loo isticmaalaa halkan - caleemaha, xididdada iyo nooca berry waxaa loo isticmaalaa in la sameeyo decoctions iyo dabeecadaha, saliidda waxaa laga tirtiraa abuurka, iyo saxarka berry ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Awoodda calaamadaha daruuriga ah si waxtar leh u saameeya maqaarka, timaha iyo ciddiyaha ayaa go'aaminaya isticmaalka elixirs iyo decoctions iyada oo ku saleysan sidii laysku daray ee shaambada, kiriimka, looska, juuska qubeyska iyo saabuunta. Seeds leh ciriiri ku filan waa dhirbaaxo aad u fiican oo ka kooban habka looxyo iyo xayawaanka.
Saameynta gabowga iyo dib u soo celinta, taas oo siinaysa isticmaalka dhirta, waxay kuu ogolaaneysaa inaad saliidda ku dhex jirto miraha daruuriga ah ee halbowlaha maskaxda, serumaha iyo kiriimka kooxda gabowga ah. Waxyaabaha noocan oo kale ah waxay u sharxaan maqaarka si fiican iyo xitaa dibedda, adoo saaraya foosha iyo suufka. Maqaarku wuxuu noqdaa mid nuxur leh, siman oo jilicsan. Kareemada maskaxda iyo maskaxaha korontada waxay hagaajiyaan saxarka daruuraha.
Waa in la ogaadaa in dhammaan shirkadaha aysan awood u laheyn inay isticmaalaan caleemaha dharka maaddooyinka xirfadlayaasha ah, iyo hababkan, sida qaanuunku, waa qaali. Hase yeeshe, waxaad isku diyaarin kartaa kuwan ama qaybo kale oo madax-bannaan, iyagoo haysta walxaha cayriin ee lagama maarmaanka ah.
Sidaa daraadeed, haddii aad jarjartid miraha cagaarka leh, waxaad u heli doontaa maaskaro aad u badan oo maqaarka qalalan iyo kuwa jilicsan (si looga fogaado miro yar yar, waxaa wanaagsan in la mariyo iyada oo loo marayo shaandhada ganaaxa, iyo si loo gaaro saamaynta foosha - u adeegso si aad u taxadar badan, ha ilaawin ku saabsan abuurka adag ).
Si aad u samayso maaskaro timaha qallalan iyo jilicsan, waxaad u baahan tahay inaad ku garaacdo 5 qaado oo ah khudradda cagaaran ee caleemaha cagaarka leh ukun digaag ah, isla markiiba u buuxi isku dar ah timahaaga, u kala qaybso dhererka oo dhan ilaa 30 daqiiqo. Muddo ka dib, maaskarada waxaa lagu dhaqaa biyo diirran, umana baahnid inaad timaha iska dhaqdid kadib. Ma aha fikrad xun in lagu daro dhowr dhibcood oo saliidda cufan ee caanaha ah sida maaskarada oo kale, hase yeeshee qof kastaa maahan mid gaar ah.
Qodobka sare ee asiidhyada dabiiciga ah ee daruuriga ah waxay keeni karaan xasaasiyad xoog lehSidaa daraadeed, khilaafaadka ayaa inta badan ku saabsan dadka u nugul xasaasiyad kala duwan, gaar ahaan ascorbic acid.
Iyadoo digniin ah, calaamadaha daruuriga ah waa in la cunaa xaaladaha boogaha caloosha iyo duodenal, gastritis oo leh astaamiyo sii kordhaya, iyo enterocolitis. Marka uu ka sii daro cudurrada noocaas ah, berrinka waa in laga reebo cuntada oo dhan.
Daawada caafimaadku ma laha liis cad oo qeexan oo khilaaf toos ah oo aan toos ahayn u adeegsanaya daroogooyinka iyo daroogooyinka ku salaysan. Поэтому если проявлять меру и не игнорировать первые признаки индивидуальной непереносимости, морошка принесет только пользу, а также удовольствие от употребления вкусного продукта.